Moto maka chainsaw igwe (HC20230B) - China Shandong Better Motor
Olee ndị bụ ndị anyị na-
Investment & Ngwaahịa
Noo & Facilities
Motors N'ihi nhicha Machine
Motors N'ihi Woodworker Machine & N'ihi Gardening Ngwá Ọrụ
Motors N'ihi aerodynamic Machine
Motors N'ihi Automotive Ngwa
Motors N'ihi na ndị ọzọ Power Machine
Moto maka chainsaw igwe (HC20230B)
Motor N'ihi Chainsaw ígwè (HC8840A)
Motor N'ihi Chainsaw ígwè (HC20230A / HC16230A)
Na-adịgide adịgide Igwe Ọdụdọ Motors N'ihi Air Compressor (ZYT7876)
Motor N'ihi Air Compressor (HC9535)
Agụụ Cleaner Motor (HC8223)
HC76 usoro maka elu nsogbu washer (HC7625 / 30/40)
Ọnụahịa FOB: US $ 0,5 - 9,999 / Piece
Min.Order ibu: 1000 Ibe / iberibe
Ngwunye ọkụ volta / njupụta (V / Hz) Enweghị ikike State Voltage （V） ugbu a （A） Ike （W） Speed ​​（rpm） HC20230B 230V / 50Hz 230 4.6 1000 3950 Ibu Ibu State voltaji （V） Ugbu a （A） Ike Ntinye （ W） Speed ​​（rpm） Torque （N · M） Ike mmepụta （W） 230 9.5 2000 2650 3.6 1000
model Voltage / Ugboro (V / Hz) No-ibu State ibu ibu State
Voltage （V） Ugbu A （A） Ike （W） Ọsọ （rpm） Voltage （V） Ugbu A （A） Ntinye ike （W） Ọsọ （rpm） Torque （N · M） Ike mmepụta （W）
HC20230B 230V / 50Hz 230 4,6 1000 3950 230 9.5 2000 2650 3,6 1000
Previous: Motor maka spraying igwe (HC95B28)
Ọrụ Electric Motor
Ac Synchronous moto
Electric Hụrụ Motor
Motor N'ihi Woodworking lathe (ZYT76105)
Motor N'ihi electric planer. (HC8050A)
Motor For Belt Sander(HC8030D)
Motor N'ihi Chainsaw ígwè (HC18-230D / G)
Motor N'ihi Mower (HC8840J / 48J)
Telp: +86 535 8612516
Faksị: +86 535 861 2560
Ekwentị: +86 13564093630
Mma Erute ọzọ Higher Annual Outp ...
2016 bụ ihe ọzọ na owuwe ihe ubi n'afọ nke Better Motor, n'ihi na nke ndị ahịa 'nkwado na Better ọrụ' dị ike ọrụ. Anyị na-na-ibu na-enwe ọganihu n'afọ ọ bụla. Kwa Afọ mmepụta ke 2016 bụ 2.9 nde tent, 450.000 tent Inc ...
Engineer Li Dongwei si Ohio State Unive ...
On June 8, Electric Engineering na akpaaka Engineer Li Dongwei si Ohio State University USA gara Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, postdoctoral nchọpụta si eletriki sayensị laabu na Ohio ...
Ngo otu nke ozi syste ...
On June 26, ngo otu nke ozi usoro engineering oru ngo na Better Motor e tọrọ ntọala. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd bụ na-elekọta nke emebe na-arụ ọrụ a na oru ngo. Ọ bụ pla ...
Portescap ewebata ndị ọhụrụ 16DCT moto ya elu torque DCT nso nke Athlonix Motors. The 16DCT moto pụrụ ịnapụta aga n'ihu torque ruo 5,24 mNm na a ogologo nke naanị 26mm. The 16DCT utilizes ike Neodymium ma ...
Olee otú agụụ cleaners ọrụ?
The umeala agụụ Cleaner bụ otu n'ime handiest ezinụlọ ihicha ngwa eji taa. Ya mfe ma dị irè imewe ka ewepụ enwe ọcha ájá na ndị ọzọ obere ahụ anya na-ebupụta site n'aka, na tu ...